China 2K karịrị Nkedo akpụzi ndị na-emepụta na ndị na-ebu ngwaahịa | Enuo Mould
Ebube agba abụọ K 2Kmold）:Abụọ dị iche iche nke plastic ihe na-ọgwụ-akpụzi na otu injection ịkpụzi igwe, na-akpụzi na akụkụ abụọ, ma ngwaahịa naanị ebu mgbe. A na - akpọkarị usoro ịkpụzi aabụọ-ihe onwunwe ọgwụ ịkpụzi, nke a na-ejikarị eme ihe site na otu usoro ebu, ma chọọ igwe ọkpụkpọ agba agba agba pụrụ iche.
Over-ịkpụzi ebu:Abụọ di iche iche nke plastic ihe na-adịchaghị ọgwụ ịkpụzi na otu ogwu na ịkpụzi igwe, na-akpụzi n'akụkụ abụọ; mgbe ewepụsịrị ngwaahịa ahụ site na ngwongwo ebu, a na-etinye ya na usoro nke ebu maka usoro ịkpụzi nke abụọ. Ya mere, n'ozuzu, a na-ejikarị usoro ebu abụọ eme ihe banyere usoro a, na-enweghị mkpa maka agba abụọ pụrụ iche.ogwu na ịkpụzi igwe.